Apple Kutora Zvinyorwa kubva kuMicrosoft? | Martech Zone
Apple Kutora Zvinyorwa kubva kuMicrosoft?
Chipiri, June 3, 2008 Svondo, Nyamavhuvhu 23, 2009 Douglas Karr
Zvinotaridza svondo rega rega ndiri kurodha pasi imwe yekuvandudza sevhisi yeVista. Munguva pfupi yapfuura, Vista yaive neService Pack pazuva rimwe chetero iro Apple raive neyakagadziriswa yavo 10.5.3 yeOS X Leopard. Kubva pakuvandudzwa kweLeopard, ndanga ndichive nematoni ezvinyorwa ndichishandisa bhurawuza… ingave iri Safari kana Firefox.
Nhasi ndafunga kudzorera Safari kuti ndione kana ndichigona kugadzirisa izvi kamwechete uye zvachose. Pandakatanga kuisirwa, ndakasangana neizvi:
Saka vakaita kusimudzira asi vakaregeredza kumisikidza yavo yekuisa Safari kuti ibvumidze iyo? Ah mudiwa Apple, pamwe unofanirwa kugara uri mudiki. Chinyangadzo ndechekuti ndiri kushandisa Firefox muParlellels pane iyi MacBookPro kuti ikozvino ikurumidze kufambisa mambure.
Tags: makirisimasiecommercezororo infographicshanduro dzeseruramagariro mabhukumakipiritsi yekushandura mweroWordpress admin
Pane Nzvimbo Yakawandisa…
Yakaramba iri paNdiza kwemaawa matatu ne3.5
Jun 3, 2008 pa 9: 51 PM
Ndakave nedambudziko rakafanana. Ndizivise iwe kana iwe ukawana gadziriso yazvo!
Pasina mubvunzo kutaura, ndanga ndichishandisa pc yangu zvakanyanya nguva pfupi yadarika. Ini ndakangoshandisa Mac chete kune izvo zvakanakira zvakadaro ... dhizaini zvinangwa.
Jun 4, 2008 pa 9: 21 PM
Ndakawana application imwe chete yaiita kunge inopokana uye ndizvo Orbicule's Chakavanzika. Ini ndakanyora rutsigiro rwavo ndikabvisa zvizere kunyorera uye ndinoratidzika kunge ndiri kuita zvirinani. Zvakanyanya kushata, ndinoda chengetedzo iyo yavo yekushandisa inopa. Ndakavakumbira kuti vandinyore pavanogadzirisa izvi.
Ndichiri kufunga kuti yavo inogona kunge iri mimwe nyaya, asi iyi yaive hombe.